निगमले चैत १९ देखि बीएस ६ मापदण्डको इन्धन ल्याउने, अहिलेका मोटरसाइकल र कारमा हाल्दा कस्तो असर पर्ला ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /बिज्ञान प्रबिधि/निगमले चैत १९ देखि बीएस ६ मापदण्डको इन्धन ल्याउने, अहिलेका मोटरसाइकल र कारमा हाल्दा कस्तो असर पर्ला ?
पालमा बीएस ६ मापदण्डको सवारीसाधन आउन सुरु भएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी बीएस ६ इन्जिनयुक्त गाडी मारुती सुजुकीले ल्याएको छ भने कियाले एउटा मोडल सेल्टोस र फोर्डले एउटा मोडल इकोस्पोर्ट बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।तर, नेपालमा अहिले गुडिरहेका अधिकांश कार तथा मोटरसाइकल बीएस ४ मापदण्डमा आधारित रहेका छन् । नेपाल आयल निगमले यही चैतको १९ गतेबाट बीएस ६ मापदण्डको इन्धन ल्याउने जनाएको छ । यस्तोमा बीएस ६ मापदण्डको तेल बीएस ४ गाडीमा प्रयोग गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो ।